Ukumazi umntu, ukuhamba ekukhanyeni kwenyanga kunye nokumanga okunomdla kukuqala kwothando olutsha. Ukuqhubeka, ubomi obumbeneyo. Kwaye kupholile ukuza ekhaya ukupheka isidlo somntu othandekayo, ulale kunye kwaye uvuke. Kwaye konke kwakubonakala kukuhle. Kodwa ayikwazi ukuqhubeka nolo lonke ubomi bakhe. Ndifuna enye. Intetho yokuqala malunga nabantwana, ukhetho lwegama, kwaye ngokukhawuleza iyacaca oko kwakungekho.
Kodwa kunkwantya, kodwa ngokukhawuleza akuyi kusebenza, mhlawumbi into engalunganga kum. Ngaba ndiza kuba ngumama olungileyo. Kodwa ngokwenene, de uze uzame, awuyi.
Iinkoliso zokuqala, eziyikrakra, kodwa kuyimfuneko ukuya kubonisana nabafazi. Kwi-reception ne-gynecologist, bathi ngokumomotheka, "Ukhulelwe," kwaye uyaqonda ukuba ulinde ixesha elide kakhulu. Ndandisoyika, kodwa ndalindela kwaye ndathemba. Ekhaya ngamaphiko enoyolo, ukwenzela ukuba uncede ngokukhawuleza uxelele iindaba ezilungileyo zintanda. Kwaye ngokuhlwa ukuvuma, ukuthetha ngoba ngubani uya kuba, intombazana okanye inkwenkwe, ekhangeleka kwaye ngubani oya kumthanda umntwana ngakumbi.
Kodwa uvuyisa kangakanani, kakhulu kwaye uxanduva lo mcimbi. Into eninzi yokwenza ngeenyanga ezilisithoba. Ngoko kufuneka ulungiselele ngoku. Inketho enhle kakhulu yokulungiselela umzimba kunye nokuziphatha, ubhalise kwisikolo soomama. Iingcali ezinolwazi ziya kukunceda ukuba uziqonde kungekho nzima, kodwa iimvavanyo ezifunekayo, ukugcina ifom ebonakalayo, oku kuya kwenza ukuba izihlunu zigcine ithoni ezokwenza lula ukukhulelwa kokukhulelwa nokubeletha. Iingcebiso zobuchwepheshe zokunyamekela umntwana wakho ziya kunceda ukuphepha iingxaki ezizayo. Ukongezelela, uya kuba nethuba lokuqhelana nabamama, abaza kuba ngabahlobo kunye nekhampani yokuhamba nomntwana. Kubaluleke kakhulu ukuba ngeli xesha lokubeleka, lo mfazi akaziva ekhethiweyo kuluntu. Emva koko, ngaphambi kokufika komntwana, ngokuqinisekileyo kwakukho ubomi obutyebi, iiholide ezinkampani, uhambo oluya kwendalo. Kwaye ezinye iindlela zihamba kunye nabantwana kwiinkampani ezimnandi, apho iimfuno zihambelana.
Ukuze uqonde kwaye wamukele isikhundla sakho ngokukhawuleza, ncokola nomntwana wakho. Vumela isisu singabonakali okwamanje, kodwa uyazi ukuba umntwana ungaphakathi kwakho, uhlala, oku kuthetha ukuba njengoko umntu ophilayo efuna ukunxibelelana. Inyaniso yokuba akayiqondi into ayithethi nto. Umntwana uva ilizwi lakho, uvakalelwa intetho. Yaye le nto yodwa emva kokuba uza kuzalwa naye. Olunye uhlobo oluhle luphulaphule umculo. Kungcono ukhethe ukuthula, hhayi iingoma ezivakalayo. Ukhetho olulungileyo luklasi. Lo mculo uhlawuliswa ngemvakalelo, ukuhlanganiswa okukhulu kwezixhobo kwenza ukuba usebenze ngeendlela ezihlukeneyo, ezivuyisa kakhulu abantwana kunye nokuncoma.
Isimo sengqondo somfazi ngexesha lokukhulelwa kunzima kakhulu. Ngenxa yokuba umzimba uqhuma i-hormonal. Ngeli xesha, njengoko kuboniswe ngabasosayensi, isixa kunye nomsebenzi wama hormone kumzimba wesetyhini kuninzi abantu abangababiyo iminyaka eyikhulu yobomi. Ngenxa yoko, ukuguquka kwemizwa rhoqo, ukulila. Kwaye kubaluleke kakhulu ukuxhasa abantu abasondeleyo, ukuziva ukuba ufuna ngokwenene. Umyeni oya kuzinyamezela zonke iifom kunye nokuzalisekisa yonke iminqweno yinkxaso ethembekileyo.
Uloyiko lokuba amava asemava ngaphambi kokubeleka ayengelona nto yokwesaba intlungu. Kodwa njengoko ubulumko obuyaziwayo buthi, kufuneka sidlule kuphela loo mvavanyo esiyiyoyisa. Ngoko le ntlungu iyanceda. Yintoni enokuthelekiswa nokuzalwa kobomi obutsha. Ukuze unike ihlabathi ubomi obutsha, kodwa wena umntu ongowokuzalwa oza kuhlala ekhona kwaye akaze ayeke ukuthanda. Ukusuka kumomotheka kuwo, zonke iintlungu ziya kuhamba, igama lokuqala "umama", oza kuzwakala njengomculo, kwaye ufudumeze umphefumlo. Kwaye ke ke uyaqonda ukuba lo ngummangaliso owanikwe nguThixo. Ndibulele uSomandla ngesipho esixabisekileyo.
Ukuvumelaniswa kweGenestiki yamaZwe
Indlela yokuphatha ukumbombozwa ngexesha lokukhulelwa?
Unokubala njani iintsuku ongazikwazi ukuzikhusela?
Ziziphi iinguqu kumantombazana ngexesha lokukhulelwa?
Ngaba ndinako abafazi abakhulelweyo?
Yintoni abantu abangayithethelela ngayo abasetyhini
Indlela yokuqokelela i-mercury ukusuka kumgangatho
I-Uraza-Bairam ngo-2016: xa umbhiyozo uqala eRashiya, eBashkortostan, eCrimea, eTatarstan. Ndiyakuvuyela kwi-Uraza Bairam kwivesi kunye neprose
Isaladi yePatato kunye nesiliva
Amanyathelo okuphuhliswa kwabantwana esibelethweni
"BWT" - umxhasi omtsha weqela labagibeli beMercedes-AMG DTM
Indlela yokupheka i-pancakes kwi-oven kunye nokuzaliswa kunye ngaphandle, zokupheka kunye nesithombe
Ikhukhi kunye nama-crranberries omisiwe
INkosana uHarry igqibile umsebenzi wakhe wemikhosi kwaye ithunyelwa ekuhlanguleni izindlovu
Iinqwelo ze-eggplant ebhakiweyo
Ukukhuselwa kunye nesondlo: iimpawu zeentloko zokuhlola iindlu ekhaya
Iimveli ze-Elixir Ultime: ukunakekelwa kwasebusika kunye neKérastase
Kwaye ukuba ngaba kuyimfuneko ukwandisa inani leeyure kwimfundo yenyama yemfundo kwiinkqubo zoqeqesho?
Aloe ekwenzeni unyango lwe-varicose
UAnastasia Volochkova wanquma ukwenza imali kwiintengiso, iifoto ezintsha